Lufthansa: Hirgelinta xirmada xasilinta oo aan la sugin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Lufthansa: Hirgelinta xirmada xasilinta oo aan la sugin
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Deutsche Lufthansa AG Shirka Guud ee 25 Juun waa in lagu go'aamiyaa tallaabooyinka caasimadda iyo saamiga 20% ee Sanduuqa Xasilinta Dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Jarmalka ee Deutsche Lufthansa AG. Hirgelinta xirmada xasilinta ee 9 bilyan oo Yuuro oo lagu heshiiyey Sanduuqa Xasilinta Dhaqaalaha waxay kuxirantahay go'aankan.
Guddiga Fulinta ee Deutsche Lufthansa AG ayaa hadda rajeynaya ka soo qaybgalka Shirka Guud ee aan caadiga ahayn ee 25 Juun inuu ka hooseeyo 50%. Marka la fiiriyo bayaannadii ugu dambeeyay ee dadweynaha ee shirkadda kaliya ee saamileyda ah, Heinz-Hermann Thiele, Guddigu wuxuu tixgelinayaa inay suurtagal tahay in xirmada xasilintu ay ku guuldareysato inay gaarto seddex meelood labo meel codadka la dhiibtay ee looga baahnaan lahaa kiiskan. Tani waxay ka dhigan tahay in Deutsche Lufthansa AG ay suuragal tahay inay dalbato dacwadaha gaashaan ka ilaalinta ee sharciga hoos u dhaca dhawr maalmood ka dib Shirka Guud ee Sannadlaha ah haddii aan xal kale loo helin isla markiiba.
Wareysi lagu daabacay fiidnimadii shalay wargayska Frankfurter Allgemeine Zeitung, Heinz-Hermann Thiele wuxuu aad u dhaliilay xaaladaha baakadka xasilinta ee lagala xaajooday Sanduuqa Xasilinta Dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka isla markaana ogolaanshihiisa u furan. Wareysiga, wuxuu ku sheegay inuu kordhiyay saamigiisa Deutsche Lufthansa AG in ka badan 15% saamiga raasamaalka isla markaana uu si rasmi ah shirkadda ula socodsiin doono tan.
Marka loo eego Sharciga Dardargelinta Xasilinta Dhaqaalaha, saddex meelood laba meel codadka la dhiibtay ayaa looga baahan yahay qaadashada tallaabooyinka xasilinta haddii joogitaanka kulanka uu ka hooseeyo 50%. Shirka Sanadlaha ah ee 5ta Maajo, oo sidoo kale la qabtay, kaliya waxaa la diiwaangeliyey joogitaanka 33%. Haddii in ka badan 50% ee raasamaalka saamiga ay joogaan, kaliya aqlabiyad fudud codadka la dhiibtay ayaa looga baahan yahay ansixin.
Guddiga Maareynta wuxuu si deg deg ah uga codsanayaa dhammaan saamileyda gaarka ah iyo saamileyda hay'adaha inay adeegsadaan xuquuqdooda codbixinta iyo inay kaqeybqaataan go'aanka ku saabsan mustaqbalka shirkadda. Waqtiga kama dambaysta ah ee diiwaangelinta si looga qaybgalo Shirka Sannadlaha ah waa 20 Juun, 24:00 saac. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Shirka Guud waxaa laga heli karaa bogga shirkadda.